PSJTV | आजबाट न्युरोडमा स्मार्ट पार्किङ, प्रतिघन्टा शुल्क कति ?
आजबाट न्युरोडमा स्मार्ट पार्किङ, प्रतिघन्टा शुल्क कति ?
काठमाडौं : आज (आइतबार) बाट न्युरोड क्षेत्रमा सशुल्क स्मार्ट पार्किङ सुरु हुने भएको छ । स्मार्ट पार्किङको आइतबार बिहान काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले उद्घाटन गर्दै छन् ।
केही दिनअघिबाट परीक्षणस्वरूप सुरुवात गरिएको स्मार्ट पार्किङ न्युरोड क्षेत्रका पाँच स्थानमा यसकोको व्यवस्था रहेको स्मार्ट पार्किङका सञ्चालक कम्पनी ह्विल्स ट्रुली योर्सले जनाएको छ । कम्पनीका आइटी कोअर्डिनेटर हरिश अग्रवालका अनुसार, रामेश्वरम, विशाल बजार, खिचापोखरी, धर्मपथ र पाकोमा स्मार्ट पार्किङ प्रणाली उपलब्ध हुनेछ । यी स्थानमा आठ सय बाइक र ६० वटा गाडी पार्किङ गर्ने क्षमता रहेको अग्रवालले बताए ।
यस्तो हुनेछ स्मार्ट पार्किङ
स्मार्ट पार्किङ प्रयोगका लागि गुगल प्ले स्टोरमा गएर ‘पार्क केटिएम’ एप डाउनलोड गर्न सकिनेछ । एपमा आफूलाई पायक पर्ने ठाउँ बुक गर्न सकिनेछ । एपले पार्किङ स्पेस छ–छैन देखाउनेछ । पार्किङका लागि १५ मिनेटअघि बुकिङ गर्नुपर्नेछ । बुकिङ गर्दा बाइक वा गाडीको नम्बरसमेत इन्ट्री गर्नुपर्नेछ । बुक गरेको १५ मिनेटभित्र पार्किङ नगरे बुकिङ रद्द हुनेछ । बुकिङ गरेको समयदेखि नै पार्किङ शुल्क लाग्नेछ । बाइकका लागि एक घन्टाको २५ रुपैयाँ र गाडीका लागि ६० रुपैयाँ शुल्क लाग्नेछ ।